हालसालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख छ । मुलुकको आर्थिक अनियमितता हेर्ने संवैधानिक निकायबाट भएको यो नै पहिलो र गहिरो अनुसन्धान हो । यसले भ्याट सर्वसाधारणलाई भारी बोकाई कर प्रशासन तथा व्यापारीका लागि अनियमितता गर्ने नीतिगत व्यवस्था बनेको देखिन्छ ।
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि चर्चामा आएको एउटा विषय हो– भन्सारको सन्दर्भ मूल्य । यसबारे कसैले व्यापारीलाई दोषी देखेका छन् । राजस्व नै कम उठ्न थालेपछि अर्थमन्त्रीले नै नराम्रो गरे कि भन्ने पनि छ । तर यसका बहुुआयामिक पाटा छन् ।
व्यवसाय गर्नु चाहनुहु्न्छ ? कर बारे यि जानकारीहरु थाहा पाइराख्नुस् ?
व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि तपाईंले सरकारले कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ । जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ ।